सम्बन्ध, सम्बन्ध को बिच्छेद
कुनै एक यो प्रेमको हानि छ, विशेष गरी यदि हानि देखि सुरक्षित छ। अक्सर गम्भीर देखिन्थ्यो कि भावना, उनको तागत गुमाउनु र हाम्रो आँखा अगाडि लुप्त होती। जो आफ्नो पूर्व आवेग कहिलेकाहीं एकदम गाह्रो ताजा, वा गरे प्रयासमा। यस मामला मा, हामी साँच्चै छ के को लागि वास्तविकता स्वीकार गर्न र कुनै कुरा यो दिइएको हुन सक्छ कसरी कठिन बस्न, जारी राख्न सिक्न हुनेछ।
एक प्रेम एक साथ जानेबेलामा आत्म को हानि तुलना छ। एक मानिस वस्तु पूर्व आवेग बाहेक केहि आनन्द भेट्टाउनुहुन्छ। दीर्घकालीन स्नेह, पहिलेका क्षणमा थप र थप थिचोमिचोमा परेका, र चेतना को हानि को मीठो सम्झनाहरु डर छाया casts। कसरी प्रेम एक बिना बाँच्न सिक्न? विगतमा फर्कन गर्दैन क्षण सजग बन्ने?
को मात्र दुःखी सम्झनाहरु हुँदा, एकाकीपनको क्षणमा, एक सधैं सम्झनुपर्छ - जीवन यहाँ अन्त छैन। , तपाईंले एक हुन् भनेर आज कुरा छैन नयाँ मित्र को धेरै छ, र त्यहाँ भोलि फरक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न, अधिक महत्वपूर्ण कुरा, तपाईंले समर्थन गर्न कुनै एक छ। एकाकीपनको स्थिति स्वीकार र आकलन गर्न सिक्न, तपाईं नयाँ आनन्दित जीवन तिर एक कदम लिनु आवश्यक छ।
समय निको पार्नुहुन्छ, र यो एउटा irrefutable तथ्य छ। त्यो समय यसको ठाउँमा सबै राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै आवश्यकता सधैं अचाक्ली हतार र पूर्व बदला गर्न, र जताततै मर्यादा कायम राख्न आवश्यक छ। मानिस यो लाग्न सक्छ रूपमा चोट रूपमा, उहाँलाई भाग्य इच्छा, दूर भयो। सम्झनाहरु sotrosh छैन, विगतमा परिवर्तन, तर यो आवश्यक छ भविष्यमा गर्न बाटो खोज्न प्रयास गर्न।
एक प्रेम एक साथ जानेबेलामा परिवार र साथीहरू मदत गर्न सक्छ को अवस्थामा। हामी बाहिर आँसु, रिसले र तीतो सम्झनाहरु बिना, फरक जीवन देखाउँदै आफ्नो एकाकीपनको पुल सकारात्मक ऊर्जा, पुस, मानव आवश्यकता आवश्यक छ। तपाईं म खुसी सभाहरूमा को क्षण सम्झनुहुन्छ रुन चाहन्छु, दुःखी महसुस, र तपाईं दुःखी हुन भने, तपाईं यो अवस्था बाहिर आफैलाई तान्न प्रयास भने? साथीहरूसँग एउटा पैदल लागि जाने, अन्तमा एक स्पा जाने, वा लामो-प्रतीक्षा किनमेल यात्रा व्यवस्था।
कुनै पनि स्थिति तपाईंले तरिका पत्ता लगाउन आवश्यक छ। आफूलाई फाइदाको लागि आत्म-यातना र आत्म-सुधार गर्दै, बस्न छैन। विगतका तपाईं सम्झाएर, सबै सम्पर्क हटाउन, सबै तस्वीर बाल्न, तिनीहरूले अनावश्यक हृदय स्मरण र आत्म-flagellation तर केही ल्याउन छैन।
विशेष गरी एक अलग कारण हेर्न प्रयास, को चरम मा Indulge गर्न आवश्यक छैन। अलग पहिले नै भएको छ, यो भयो, र केही गर्न सकिन्छ, तपाईं प्रदान लागि यो लिनु आवश्यक छ। औंलाहरु, दर्शाउन आवश्यक छैन प्रभाव, सबै एक भ्रम छ, को कारण, वास्तविक जीवन धेरै रोचक सम्झनाहरु छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईंलाई फाले भने, अझै पनि थप भाग्यवान् थियो थाहा छैन बुझ्न आवश्यक छ। सायद एक उच्च यसरी शक्ति गलत निर्णय तपाईंले सुरक्षित छ, र आफ्नो खुशी आउन अझै छ।
मुख्य कुरा हो - एक मान्छे को हजारौं बीच, यो विचार गर्न, र केवल धोका गर्ने छैन, चोट छैन र चोट छैन। तपाईंको लायक मूल्यांकन गर्ने एक, जसलाई तपाईं सधैं भरोसा गर्न सक्छन्, मुख्यतया एक प्रेम एक हुनेछ। सुन्दर राजकुमार अवस्थित छैन, तर जसको लागि लोयल्टी र प्रेम अझै पनि एक उच्च मूल्य प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय मानिसहरू द्वारा Inhabited संसार मा।
कठिन अवधि: को छोडपत्र पछि बाँच्न कसरी
छोडपत्र र आमा को प्रथम नाम, वा किन मानिसहरू आफ्नो पत्नीलाई छोड्न?
Otshit मानिसको रूपमा: मन परेन गर्न सिक्ने
भावशून्यता ... यो एक भावना वा भावना छ?
कसरी अलग बच्न
तपाईं कसरी प्रेम गर्दैन गर्ने व्यक्ति मायालु रोक्न? मनोवैज्ञानिक सल्लाह
भोक कसरी कम गर्न र आफ्नो आहार लीन
लागूऔषधको एक समीक्षा, विशेष गरी स्वागत मूल्यांकन: सर्जरी पछि सर्वश्रेष्ठ एन्टिबायोटिक
को कहावत-ढाँचा कल कसरी? त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्!
भरी बैगुन पकाउन सिक्नु
Maykl Dunkan - अमेरिकी अभिनेता, चलचित्र "द ग्रीन माइल" बाट प्रसिद्ध मृत्यु पङ्क्ति सहवासी
दमास्कस इस्पात Nazarov को चक्कु: प्रकार, सुविधाहरू, समीक्षा। गाँस्न Nazarova वी वी
यसलाई हड्डी को मोबाइल जडान को नाम थाहा महत्त्वपूर्ण छ
"Plaquenil" हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
Toroneos होटल - ग्रीक तट मा एक महान छुट्टी
"ओपल मोन्टेरे": प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा
घर क्यानमा पाठ: compote dogwood बन्द गर्न कसरी